OTU ESI ACHỌTA PASWỌỌDỤ SITE NA WI-FI NA WINDOWS 8.1 - WINDOWS - 2019
Otu esi achọta paswọọdụ site na Wi-Fi na Windows 8.1
Tupu mgbe ahụ, edere m ntụziaka banyere otu esi achọpụta paswọọdụ Wi-Fi echekwa na Windows 8 ma ọ bụ Windows 7, ugbu a, achọpụtara m na usoro ahụ eji rụọ ọrụ na "asatọ" ahụghị ọrụ na Windows 8.1 ọzọ. Ya mere, edere m akwụkwọ ọzọ dị mkpirikpi banyere isiokwu a. Ma ọ nwere ike ịdị mkpa ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ịzụtara laptọọpụ ọhụrụ, ekwentị ma ọ bụ mbadamba ma chetaghị paswọọdụ ya, ebe ọ bụ na ejiri ihe niile jikọọ na akpaghị aka.
Mgbakwunye: ọ bụrụ na ị nwere Windows 10 ma ọ bụ Windows 8 (ọ bụghị 8.1) ma ọ bụ ọ bụrụ na echekwaghị Wi-Fi paswọọdụ gị, ma ị ka ga-ama ya, ịnwere ike jikọọ na rawụta (dịka ọmụmaatụ, site na wires), A na-akọwa ụzọ ịlele paswọọdụ echekwara na ntụziaka ndị a: Otu esi chọpụta paswọọdụ Wi-Fi gị (enwerekwa maka ozi gam akporo na ekwentị).
Ụzọ dị mfe iji lelee paswọọdụ ikuku gị echekwara
Iji chọpụta paswọọdụ Wi-Fi na Windows 8, ị nwere ike ịpị aka na njikọ na pane nri, nke a na-akpata site na ịpị akara ngosi nke njikọ ikuku na họrọ "Lee njikọ njikọ". Ugbu a enweghị ihe dị otú ahụ
Na Windows 8.1, ị chọrọ naanị ụzọ ole na ole iji lelee paswọọdụ echekwara na usoro ahụ:
Jikọọ na netwọk ikuku nke onye ịchọrọ ịlele;
Pịa aka nri na akara njikọ dị na ebe ngosi 8.1, gaa na Network na Sharing Center;
Pịa na Netwọk ikuku (aha nke ugbu a Wi-Fi netwọk);
Pịa "Njirimara Ikuku Ala";
Mepee taabụ "Nche" ma lelee "Gosi ọsọ ọsọ" na igbe nlele iji hụ paswọọdụ.
Nke a niile, na paswọọdụ a ị bịara mara. Naanị ihe nwere ike ịghọ ihe mgbochi iji lelee ya bụ enweghị ikike Nchịkwa na kọmputa (ha dị mkpa iji mee ka ngosipụta nke ihe odide ahụ e dere).